Apple inotaura zvakanaka kune iyo HomePod | IPhone nhau
Apple inotaura zvakanaka kune iyo HomePod
Mukufamba kwakashamisa munhu wese, Apple yakangosimbisa kuti yayo yepamusoro-yepamusoro smart mutauri, iyo HomePod, ichamiswa panongopera masheya aripo.
Apple yatipa mangwanani akanaka neMugovera uyu nenhau dzisingatarisirwi zvachose: inozivisa kuti iri kudzima iyo HomePod. Mutauri wekutanga akangwara uyo kambani yakatangisa kumashure muna Chikumi 2017, kunyangwe isina kutanga kutengeswa kusvika Ndira 2018, haichazowanikwazve kutengwa muzvitoro zvepamutemo panongowanikwa stock iri muApple zvitoro. Izvi hazvireve kuti rakasiiwa zvachose, nekuti Apple yakazivisa kuti ichaenderera nekuvandudzwa kwayo. uye software level yekuvandudza.
1 HomePod, imwe yandinoda uye ini handigone
2 Iyo HomePod mini ndiyo ramangwana reApple
3 Pamwe zviri nani kutanga kubva pakutanga
HomePod, imwe yandinoda uye ini handigone
Kubva panguva yekutanga iyo HomePod yaibatanidzwa mumakakatanwa ekare ekutanga kweApple. Hunhu hweinzwi kupfuura chero kusahadzika, asi mubatsiri ane zvakawanda zvinogumira uye nemutengo wakakwira, yakakwira zvakanyanya kupfuura zvigadzirwa izvo makwikwi anotipa isu, ine yakaderera mhando mhando, ichokwadi, asi zvimwe maficha padanho re software. Nekudaro, iyo Cupertino kambani yanga ichivandudza mutauri wayo nemapurogiramu esoftware anga achimupa kugona nyowani, kunyangwe ichinonoka kupfuura zvaidiwa nevashandisi. Muchokwadi, kuzivikanwa kwekutaura hakusati kwawanikwa mune mimwe mitauro isiri Chirungu.
Kune izvi kwakawedzerwa zvimwe zvakakosha zvakanyanya pakutanga izvo zvakaratidza nzira yese yeiyo HomePod. Kuvharwa kuApple ecosystem kwakadzora zvakanyanya vashandisi vanogona kuwana zvakanyanya mairi. Iyo HomePod yakatanga yakavharwa zvachose kune Apple zvigadzirwa nemasevhisi, uye kunyangwe nekufamba kwenguva mimwe mikova yakavhurwa, senge yechitatu-bato mimhanzi masevhisi, zvakare kunonoka mukugadzirwa kwezvinhu izvi kwakapera nekushivirira kwevazhinji vashandisi vasina kumboona iyo HomePod senzira chaiyo kune vamwe zvemakwikwi zvigadzirwa.
Iyo HomePod mini ndiyo ramangwana reApple
Apple yataura kuti vari kuenda kuzotarisa kuvandudzwa kwePambaPod mini, ndiko kuti, haina kusiya maspika akachenjera, uye idzodzo inhau dzakanaka. Iyo diki "hama" yeiyo HomePod ine zviito zvakafanana mabasa, zvisinei iine mabhenefiti maviri akaita kuti chive chigadzirwa chinonyanya kunakidza kune vashandisi. Yokutanga yavo, pasina kupokana, mutengo wayo. Hunhu hwekurira uye mashandiro eiyi HomePod mini zvinonyanya kunakidza nemutengo we € 99 pane iyo € 329 iyo yekutanga HomePod inodhura. Zviripachena ine simba rakaderera uye rakadzika rezwi mhando, asi zvinokwana kune vazhinji veavo vari kutsvaga mutauri akangwara kune yavo yekutandarira kana yekurara. Iwe unogona kutotenga maviri uye kuabatanidza iwo mu stereo, uye iwe uchiri kure kure nemutengo weiyo hombe HomePod.
Mukana wechipiri ndewekuti rakazvarwa riine nzira refu yekuenda neyekutanga HomePod. Izvi zvinoreva kuti haina kutakura nhoroondo yayo yese. Kunyangwe sekutaura kwandakamboita, iwo anenge akafanana mukushanda, iyo HomePod mini yakavhurwa ihwohwo mashandiro atove kushanda, saka haina mavara e "mbeveve mubatsiri", "mashoma", "akavharwa"… Kuti iyo HomePod yakareba-yakundwa uye haizombofa yakaibvisa kunyangwe kugadzirisa.
Pamwe zviri nani kutanga kubva pakutanga
Sarudzo yekuregedza iyo HomePod inoshamisa, asi kana isu tichifunga nezvazvo, inogona kuve nemusoro wayo. Iyo $ 99 HomePod mini yakaratidza kuti kune yakawanda nzvimbo yeApple mune yakangwara mutauri musika, kwete kupfuura € 300. Kuvandudza iyo yekutanga HomePod uye kutanga kuitengesa pa € ​​200 raizove danho iro vazhinji vasinganzwisise, uye hazvinganzwisisike kuvhura mutauri nyowani mutauri ane yakafanana inzwi rezwi uye aine zvirinani maficha pamutengo wakaderera, kuchengetedza HomePod mukati iyo katarogu. Panguva ino, uye mushure mekunge HomePod mini yaratidza kuti iyo yekutanga HomePod zano yanga isiriyo, zvingave zvakanaka kutanga kubva pakutanga.
Zvisinei, usaridze alarm: Iyo HomePod ichaenderera ichiwana rubatsiro kubva kuApple nesoftware inogadziridza. Muchokwadi, mwedzi mishoma yapfuura, yakawana kugona kubatanidza neApple TV kuti igadzire yako Imba Theatre, iyo iyo HomePod mini isingakwanise kuita. Iyo HomePod inomira kutengesa, asi ichine hupenyu hwakawanda pamberi payo, uye kune avo vedu vachiri nemaawa akawanda emumhanzi vachianakirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inotaura zvakanaka kune iyo HomePod
Chii chinonzi zita rewachi rinowanikwa mumufananidzo wekutanga wechinyorwa? Ndatenda
Mifananidzo mitsva yemberi AirPods 3 yakaburitswa
iOS 14.5 ichapa mukurumbira kune iyo Mute isingazivikanwe Kufona basa